Samsung ကအင်တာနက်ကို Browser ကို Beta APK အား Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » Samsung ကအင်တာနက်ကို Browser ကို Beta ကို
Samsung ကအင်တာနက်ကို Browser ကို Beta APK အား
တဦးတည်းခြေလှမ်းရှေ့ကို Samsung ကအင်တာနက်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် features တွေထွက်စမ်းကြည့်ပါ!
သင်, လုံခြုံပုဂ္ဂလိကနှင့် optimized မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဆာ၏နောက်ဆုံးပေါ် features တွေစောစော access ကိုပေးခြင်း Samsung ကအင်တာနက်ကို Beta ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း။
အခုတော့အထက်က Android 5.0 နှင့်ထောက်ခံပါတယ်။
Samsung ကအင်တာနက်ကိုကအင်တာနက် browsing နေချိန်မှာသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
Android အတွက် Samsung ကအင်တာနက်ကို 3rd ပါတီ apps များအကြောင်းအရာလုပ်ကွက်များအတွက် filter များပေးခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဖန်သားပြင်ရှုပ်ပွမလိုအပ်သောအကြောင်းအရာများမပါဘဲဝဘ် browse နိုင်ပါတယ်။
enabled တစ်ဦးအကြောင်းအရာ blocker နှင့်အတူ contents တွေကိုအသစ်ကအကြောင်းအရာ blocker အခြေအနေ UI ကိုအတူပိတ်ဆို့ပြီမည်မျှကြည့်ရှုရန် Menu ထဲမှာကြည့်ယူပါ။
* လျင်မြန်စွာ Menu ကို
အသစ်လျင်မြန်စွာ Menu ကိုအသုံးဝင်သော features တွေဖို့အစာရှောင်ခြင်း access ကိုပေး, Extensions အကန်အတွက် enabled နိုင်ပါသည်။
အသစ် High Contrast Mode ကိုအမြင်အာရုံချို့ယွင်းတူသောပိုပြီးအငြိမ့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကြည့်ရှုရန်တိုးလာဆနျ့ကငျြဘလိုအပ်သောသူတို့အဘို့, အ Accessibility setting တွင်ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
* Web ကိုငွေချေမှု
web ပေါ်မှာစျေးဝယ်သင်သည်ထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သာအနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံပေးဆောင်ခွင့်သစ်က်ဘ်ငွေချေမှု API အတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပိုမိုလုံခြုံအစဉ်အမြဲထက်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မယ်။
* CloseBy (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်)
သင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဝက်ဘ် Beacon ချဉ်းကပ်သောအခါ, CloseBy ဝန်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်ဖော်ပြချက်ဖေါ်ပြခြင်းသတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်စေမည်။ သင်အလွယ်တကူအားဖြင့်နီးကပ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ရယူတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်။
* တိုးတက်ရေးပါတီက Web Apps ကပအရိပ်အယောင်တံဆိပ်
တိုးတက်ရေးပါတီက Web Apps ကပ apps များကဲ့သို့အ installed ဒါမှမဟုတ် browser ကိုများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် applications များဖြစ်ကြသည်။ စာမကျြနှာသငျသညျအထောက်အကူဒီ feature ကြည့်ရှုကြသောအခါတစ်ဦးအရိပ်အယောင်တံဆိပ် URL bar မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယိုကိုလက်ထောက်ဗီဒီယိုများကြည့်နေစဉ်သင်အမျိုးမျိုးသော View mode အကြားအကူးအပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ pop-up ကစားသမားဗီဒီယိုများကြည့်နေစဉ်သင်ကဝက်ဘ် browse ပေးနိုင်ပါတယ်။
* 360 ဗီဒီယို
သငျသညျလညျး GearVR နားကြပ်ဝတ်ဆင်ရန်မလိုဘဲလက်ကို browser အတွက်စွဲငြိဖွယ်ရာဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်တို့ပတ်လည်ကြည့်ဖို့ 360 ဗီဒီယိုများဝေ့မှပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Samsung က devices များနှင့်အတူပိုမိုကောင်းမွန်ဘက်ပေါင်းစုံ
* Virtual Reality ဝဘ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ! တစ်ဂီယာ VR သို့ဖုန်းကိုချထားပါသို့မဟုတ်သင်တဲ့ web page ကိုကြည့်ရှုနေကြသည်ကြောင့်စွဲငြိဖွယ်ရာ Virtual Reality အတွက်ဖွင့်လှစ်မည်သည့်အခါနားကြပ်စိတ်ကူးယဉ်။
* Samsung ကအင်တာနက်ကိုယခု DeX အထိုင်နှင့်အတူ desktop ကိုကြည့်ရှုခြင်းအဘို့အ optimized ဖြစ်ပါတယ်။
- High Contrast Mode ကို
- Web ကိုအင်ဂျင်ကိုခရိုမီယမ် 56 အဆင့်မြှင့်နေသည်
- ဝက်ဘ်ဘလူးတုသ်, WebGL ကို2နှင့်ဂိမ်းဆော့ခလုတ် Extensions အပါအဝင်အလံကနေတဆင့် enabled နယူးစမ်းသပ် features တွေ,
SMS ကို: Wi-Fi ကို sign-in အဘို့အလိုအလျှောက် SMS ကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း function ကိုပေးအသုံးပြု
ယခင်ကခွင့်ပြုခဲ့ခွင့်ပြုချက်ဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုအပြီး device ကို setting တွင် Apps ကပ menu ပေါ်တွင် reset နိုင်ပါသည်။
ဏ Bug ပြုပြင်မှုများ
Samsung ကအင်တာနက်ကို Browser ကို Beta ကို
63.81 ကို MB
Ltd. , က Samsung Electronics ၏ Co. ,
ပါဝါကို Browser ကို - ...
စင်ကြယ်သော Web ကို ...
Samsung ကဂီယာ 360 (နယူး)
7 ဖူးဖြစ်ရမည် ...